'Ayifane ibeneNdawo yokulala'- eMudjimba Beach - I-Airbnb
'Ayifane ibeneNdawo yokulala'- eMudjimba Beach
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguClare
Eli gumbi likhaphukhaphu nelinomoya elinomoya eline-ensuite libekwe ngokufanelekileyo kulwandle lwaseMudjimba. Iziqulathe ngokwayo ngomnyango wayo wabucala, ibekwe kwisitrato esithule kakhulu kwibhloko enye kude ne-surf, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Iindwendwe zinokupaka kanye ngaphandle komnyango. Izibonelelo ziquka ifriji yebha, umabonakude osimahla ukuya emoyeni kunye neWifi, iiDVD, itoaster kunye nezixhobo eziluncedo zokwenza ikofu kunye neti.
Kukho ibhedi ephindwe kabini, ilungele umntu omnye okanye ababini kunye neendawo zamandla ezikufutshane zokutshaja iifowuni. Ifeni enkulu yesilingi incedisana nempepho epholileyo yaselwandle kunye ne-air-conditioner. Iindwendwe zinokufikelela kwindawo encinci yokuhlala ngaphandle kwesango lokungena, ilungele ikofu yasekuseni okanye isiselo sangokuhlwa, ukonwabela iintaka, ngokuqhelekileyo i-rainbow lorikeets, isitya kwimithi ye-melaleuca ekhulile.
Isitshixo esidityanisiweyo kunye nesibane sokhuseleko ngaphandle kwesango zenza iindwendwe zikwazi ukuza kwaye zihambe nanini na zifuna.
I-Mudjimba Beach yindawo ethule kakhulu apho abahlali (kunye neendwendwe) bahlangana kusasa okanye emva kwemini natter kwi-boardwalk, ikofu kwi-esplanade kunye / okanye ukuhambahamba ngaselwandle kunye nezinja zabo. I-surf igadiwe unyaka wonke kwaye ithandwa ngabakhweli beebhodi kunye nabalobi. Iivenkile zasekuhlaleni zibandakanya i-newsagency/general store, ivenkile yokubhaka, ilungisa iinwele, intlanzi ethathwayo kunye nevenkile yetships, iikhefi kunye neendawo zokutyela. Kukho iColes Supermarket, iKhemesti, kunye neTavern/Ivenkile yeebhotile kwilali yaseNorthshore, kumgama oziikhilomitha ezi-2. Malunga nomgama ofanayo ukuya kwamanye amazwe, kukho iTwin Waters Novotel Resort kunye neRamada Surfair Resort, iindawo zomtshato ezidumileyo kunye neendawo zeenkomfa. I-Sunshine Plaza e-Maroochydore (imizuzu elishumi indlela ngemoto) yindawo enkulu yokuthenga apho i-Birch, i-Carroll kunye ne-Coyle Cinema, i-Myers, i-Target, i-Big W kunye ne-Kmart yabelana ngeZiko lokuThenga kunye neevenkile ze-320 ezikhethekileyo.
Mna nomyeni wam siya kukuvuyela ukunamkela xa sifika ekhayeni lethu. Siza kufumaneka ngexesha lasemini ukuze sikuncede ukuba kuyimfuneko, kodwa siyakuxabisa ukuba neemfihlo zakho ngoko ke, ngaphandle kokuba unqwenela oko, siya kuhlala kwiindawo zethu zokuhlala kwelinye icala lendlu.
Mna nomyeni wam siya kukuvuyela ukunamkela xa sifika ekhayeni lethu. Siza kufumaneka ngexesha lasemini ukuze sikuncede ukuba kuyimfuneko, kodwa siyakuxabisa ukuba neemfihlo zakho n…